Xog: Maxaa iska beddelay go'anka Farmaajo ee safaarada Ethiopia looga rarayo Villa Somalia? - Caasimada Online
Home Warar Xog: Maxaa iska beddelay go’anka Farmaajo ee safaarada Ethiopia looga rarayo Villa...
Xog: Maxaa iska beddelay go’anka Farmaajo ee safaarada Ethiopia looga rarayo Villa Somalia?
Muqdisho (Caasimada Online) – Waxaa soo baxaaya warar dheeraad ah oo ku aadan go’aanka Madaxweyne Farmaajo uu Safaarada Ethiopia uga raraayo Xarunta Villa Somalia.
Wararka soo baxaaya ayaa sheegaya in Madaxweyne Farmaajo uu Dowlada Ethiopia ku qanciyay in Safaaradeeda ay ka rarto Villa Somalia isla markaana ay u yagyeesho dhismo cusub.
Madaxweynaha Somalia Maxamed C/llahi Farmaajo ayaa Ra’sul wasaaraha Ethiopia Hailamariam Desalegn u sheegay in sharciga Villa Somalia looga raraayo Safaradaha ku dhexyaal uu yahay mid ay ka siman tahay DFS, loona baahan yahay in Ethiopia ay ku qanacdo sharciga dowlada cusub.
Madaxweyne Farmaajo ayaa sidoo kale Ra’sul wasaaraha Ethiopia Hailamariam Desalegn u sheegay in Safaaradaha laga guurinaayo Villa Somalia ay ku jirto Safaarada dowlada Djibouti oo xiriir walaaltinimo ay kala dhexeyso Somalia.
Sidoo kale, Madaxweyne Farmaajo oo ka dhabeynaaya go’ankiisa ayaa dowlada Ethiopia ku qanciyay inay ka guurto Xarunta Safaarada ee ku dhextaal Villa Somalia.
Si kastaba ha ahaate, Madaxweyne Farmaajo ayaa ku guuleystay in dowlada Ethiopia uu ku qanciyo go’aankiisa ku aadan ka guurida Villa Somalia, waxa uuna go’aankaasi saameynayaa dhammaan Safaaradaha ku dhex shaqeeya Xarunta Madaxtooyada.